Gijimani, masibe namandla! | UZhenji
—Aba-11th umjaho omude wokugijima
Umjaho we-11 kaMongameli kikkoman zhenji ukudla co., Umjaho wokugijima amabanga amade wabanjwa ngoJuni 15, 2019.Kulo mjaho wokugijima ibanga elide, kufaka phakathi umphathi jikelele, kukhona ababambiqhaza abangama-394 bebonke. Bahlukaniswe ngamaqembu amane ngokuya ngeminyaka: iqembu lentsha (owesilisa nowesifazane) neqembu eliphakathi (labesilisa nabesifazane).
Le ndlela ende yokugibela iqala ukusuka esangweni legatsha le-zhao County, ukusuka kumgwaqo wase-shita oya empumalanga → umgwaqo we-shiqiao uye eningizimu → umgwaqo we-huancheng uye entshonalanga → umgwaqo kazwelonke osenyakatho → umgwaqo oshisayo osempumalanga isango lemboni, inkambo yomjaho isiyonke ingamamitha ayi-3000.
Abagijimi, bebegqoke izikibha ezazikhishwe yinkampani, bazijabulise ngokwabo njengoba bejaha umjaho ngomncintiswano.
Ukugijima, kungasenza sikhohlwe iminyaka, nezinhliziyo zabo ukuthi isibindi sokuqhubekela phambili ndawonye!
Ukugijima, kungasivumela ukuba sikhohlwe ubulili, kuphela ngezinhliziyo zabo siqu ezingabumbeka ndawonye!
Ukugijima, kungasenza sisondele emgomweni, sizizwe sikhululeka kanye nesivinini, sizwe ukudedelwa kwamandla nenjabulo, la mandla amahle aqhutshwa, ndawonye emfuleni ogelezayo wamandla, ogeleza emgwaqweni omude, ezinhliziyweni zabantu , ujabule futhi ushukumisile.
Ngemuva komncintiswano omkhulu, iqembu ngalinye lakhetha abagqugquzeli abalishumi abaphezulu futhi labathola umklomelo wokuqala, umklomelo wesibili kanye nomklomelo wesithathu ngokulandelana.Imiklomelo yizinto ezisebenzayo ezinjengomkhiqizi womkhiqizo odumile, ukucwilisa kabili kwehlobo kanye ne-rack ekhishini enezingqimba ezine, okuyizinto hhayi imiklomelo kuphela yokugijima ibanga elide, kepha futhi nesikhuthazo nokuvuma kwabasebenzi ukukhombisa amandla abo amahle.
Ngonyaka olandelayo, ake sidlale futhi!
Isikhathi sokuthumela: Jun-13-2020